डा. सुन्दरमणि भन्छन् : माओवादीले राजतन्त्र राख्‍न खोजेको थियो – Kantipur Press
नेपाली कांग्रेस विवेकशीलको पुच्छर भयो
काठमाडौँ : नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले माओवादीले राजतन्त्र जोगाउन चाहेको खुलासा गरेका छन् ।
रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको कार्यक्रम मूल प्रवाहमा मं‌गलबार बिहान कुरा गर्दै ख्यातिप्राप्त चिकित्सक पनि रहेका डा. दीक्षितले राजतन्त्र जोगाउने सन्देश माओवादीले आफूमार्फत् ज्ञानेन्न्द्रसम्म पुर्‍याएको खुलासा गरे ।
‘शाहव‌ंशीय राजतन्त्र ज्ञानेन्द्रको बेवकुफीले गयो । २०५९ मा ज्ञानेन्द्रले बेबकुफी देखाएर कू नगरेको भए गणतन्त्र आउँदैनथियो’, उनले भने, ‘माओवादीहरुले मलाई २०५९ सालमा नमूना राजतन्त्र राख्छौँ भनेर ज्ञानेन्द्रसम्म खबर लगिदिन भनेका थिए ।’
डा. दीक्षितले माओवादीले पठाएको उक्त सन्देश आफूले गोकर्णमा ज्ञानेन्द्रले करिब ४ सय व्यक्तिहरुसँग आयोजना गरेको भेला राखिदिएको बताए । ‘माओवादीले राजतन्त्र राख्ने प्रस्तावसहितको सन्देश मैले गोकर्णमा ज्ञानेन्द्रसामू लिखितरुपमै राखेको थिएँ’, उनले भने, ‘तर ज्ञानेन्द्र शाहको आफ्नै महत्वाकांक्षाका कारण राजतन्त्र गयो ।’
माओवादीले नचहाँदा नचहाँदै राजतन्त्र ढलेपछि नेपालमा कयौँ राजाको जन्म भएको भन्दै कटाक्ष गरे । उनले गणतन्त्रमा जनता राज्य सञ्चालकसँग डराउनुपर्ने दिन आएको पनि उल्लेख गरे ।
फरक प्रसङ्गमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै कुराको डर भएको पनि जिकिर गरे । ‘ओलीजीलाई केही डर छैन, प्रचण्डलाई खाइजानु भयो । झलनाथ माधवलाई त काँच्चै खानु भयो’, उनले भने, ‘राज्य चलाउनेसँग जनता डराउने होइन, जनतासँग राज्य सञ्चालक डराउनुपर्छ । तर यहाँ त उल्टो भएको छ ।’
उनले सरकारबारे पनि कटाक्ष गरे । ‘सरकार अहिले सपनाको सौदागार भएको छ, सपना मात्रै बाँडिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले काम गर्ने भन्दा धेरै हल्ला गरेर बसेको छ ।’
नागरिक अगुवा डा. दीक्षितले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबारे पनि कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले कांग्रेसलाई विवेकशील पार्टीको पुच्छरको संज्ञा दिए ।
‘नेपाली कांग्रेस त अहिले विवेकशील-साझाको पुच्छर भएको छ’, उनले भने, ‘विवेकशील पार्टी माइतीघरमा गएर उफ्रेपछि त्यसैलाई पछ्याउँदै कांग्रेस पनि माइतीघरमा उफ्रिन्छ । कांग्रेस अहिले एजेन्डाबिहीन भएर विवेकशीलको पछिपछि हिँडिरहेको छ ।’